Iddoon jiioloojikaal sarveyii Ittophiiyaa diigamee tajaajilli riil steetiif ooluuf jadhamee Salaamaawwit mangashaatiin. - ዜና ከምንጩ
Iddoon jiioloojikaal sarveyii Ittophiiyaa maree ogeeyyota dhaabbatichaa ala minsteera saayinsiif teeknoloojii injiinar Taakkala Umaatiin hoogganamuun diigamee iddo saatii mannetiin riil saatii ijaaramuudhaafi jadhamee.
Buurqaawan Addis maaladaa akka jadhaniitti yoo ta’e mannii hoojii injiinar Taakkala Umaatiin hoogganamuu akkaataa bajata Wagga harwaa isaa ragga’en akkaataa hoojii turee dhiisuudhaan caasaa haarwaadhaan gurmaa’e hojjatootas hiirriisuudhaan hojiin nama sadii nama tokkon akka hojjatamu taasiifamaa jira.
Karoorri mana hojii kana diiguu doggoggora ta’uusaafii dhaabbatichaa biyyaaf heeddu barbaachiisaa akka ta’e kaasuudhaan miniisttirri bishaan jallisiif aniisaa doktar injiinar Silashii Baqqalaa mormaa akka jiran buurqaawwan eeraniiru.
Buurqaawwan Addis maaladaa akka ibsaniiru ministrichii gara mana hojii albuudaaf booba’a erga dhuftanii jalqabee waajjira jiioloojikaal sarveyii iratti kasaaraawan gurgudda akka ba’an taasiifamaa tureera jadhaniiru.
Kanneen kessaa tokkon filannoodhaan booda qarshiin miiliiyoona afur projaktii qotiinsa bishaan lafa kessaa fufee minsteera jallisiif albuudaaf darbee dhaabbatichaa irratti dhiibbaa bulchaa jiraachuu burqaawwan ibsaniiru.
Waajirrii ministeeriichaa jiioloojikaal sarveyiif hojii qu’annaaf kaartaa labsiidhaan isaa kennamee harkaa fuudhuudhaan minsteera albuudaaf anniisaa kessatti akka garee tokko taasiisudhaan kabaja dhaabbatichaa dhabsiisuudhaan biyyatti adunyaa iratti biyya dhaabbata jiioloojikaal hinqabnee tokko taasiisaan jachuudhaan libsuu Warren kana irratti komee dhiiyessan.
Jioloojikaal sarveyii ittophiiyaa kutaa magaalaa boolee guurd shoolaatti kan argamu yammu ta’u konkoolattota gurgguddaafii giddu galessaa hojjii dirref ta’an naannoleettimoo waajiiraalee damee heddu,gitawwan hojii 1192 fi hojjatoota 650 kan qabu ta’un beekamaadha.
Hojjatoota kana kessaa 300 ol ogeeyyota sesmoolojii,voolkaanoolojii,jii’otarmaal ji’oolojii, jiii’oo keemstrii,haayidiroolojii,injiinariing jiioloojii ,riisarvaayer injiirnariing ,injiinariingii diriiliing fii laabraatorii ta’uusaaniis addis maaladaan hubateetti.
Dhaabbatichii bara 1960tti ministeera humnaafii bishaan jalatti sadarkaa qajeelchaa eeguu hundeefamee booda bara 1975tti of danda’e moogaasa inistitiyuutii qu’annaaf jiioloojii ittophiiyaa jadhuun itti waamamttummaa ministeera albuudaaf aniisaan gurmaa’ee.
Xumuura irattis bara 1992tti labsii lakkofsa 194/1992n mogaasa jioloojikaal sarveyii ittophiiyaa jadhamuun ittii waamamnnisaa ministeera albuudaaf booba’a ta’ee lammaffa caaseefamee.Gurmaa’insa waajiiraalee motuummaa feedaraalaa bara 2003 taasifameen dhaabbatichii mogaasa itti gaafatamaa fii hojii dura qabuun itti waamamnnisaa ministeera albuudaaf ta’e hojjachaa jira.
Hojiin dhaabbatichaa ola’aanaa tooftaa qorannaafii wayee qabeenyaa lafaa albuudawwan lafa kessatti argamaniif kuufama qaban geggesuu qorachuu,tilmaamuufi bakka albuudnii jiru adda kaasaniiru muliisuudha.
Dhaabbatichii hojiilee qotiinsaafi laabraatorii idiilee hojjatuu itti dabalee maashinoota qabu biraan tajaajillamtoota galaafate hojii dabalaa qotiinsaafi qorannaa laabraatorii hojji giddutti
maatii ragaa wayee lafaa hojjachuudhaan galii amma qarshii miiliiyoona 20 akka walitti qabuu nii ibsama.
Kanatti dabalees aluutoo laangaanootti akkaataa huumna elektriikii meegaa waatii 70 burqsiisuu karoorfameen boqonnaa jalqabaan meegaa waatii 35 burqsiisuu danddesiisuu karoorfameen qootinsii villas hojjatamu jira.
Dabalaaniis naanno tandaahootti hojiin qotiinsa bollaa meegaa waatii 12burqisiisuu danddesiisuu hojjatamuudhaaf qopha’amaa jiraachuu beekuun danda’ameera.
Total views : 7505318